In ka badan 80 Al-Shabaab ah oo lagu dilay dagaalka ka dhacay deegaanka Baar Sanguuni – Radio Muqdisho
Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa dowlad Goboleedka Jubbaland oo iskaashanaya ayaa howlgal ballaaran haatan ka wada deegaanka Baarsanguuni iyo nawaaxigiisa,iyagoo ku raad jooga maleeshiyaad ka tirsan koxda Alshabaab oo saaka arrornimadii weerar ku soo qaaday fariisin ay ciidamadu ku lahaayeen halkaasi.
Kooxaha argagixisada Alshabaab ayaa weerar ku bilowday Labo gaari oo qaraxyo ah ku qaaday deegaanka Baarsanguuni oo ay fariisimo ku lahaa deegaankaasi,balse ciidanka Militariga Soomaaliya ayaa iska difaacay weerarkaasi,iyagoo qasaare xoogan u geystay maleeshiyaadkii weerarkaasi soo qaaday ee Alshabaab.
Wasiir kuxigeenka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Mudane Aadan Isxaaq Cali ayaa Wakaaladda SONNA u sheegay in Ciidanka Xoogga dalka oo ka feejignaan dhagarta Al-shabaab ay halkaasi ku toogteen ilaa 87-ka tirsanaa maleeshiyaadkii weerarka naf lacariga ah soo qaaday,iyadoo sidoo kale ciidamadu ay ku raad joogaan firxadka argagixisada.
Wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegay in ilaa Buundada Araare uu dagaalku gaaray,iyadoo ciidanka Xooga Dalku ay isku fidiyeen deegaano hor leh, oo ay ku dhuumaalaysanayaan koxda argagixisada ah ee Alshabaab.
Argagixisada ALshabaab oo u muuqda kuwo waqtigoodi uu sii dhamaanayo awoodoodina ay sii daciifayso ayaa isku daya weerar nafla caarinimo ah,balse ciidanka qalabka sida ee Soomaaliyeed ayaa heegan ballaaran ugu jiraa sidii dhagarta Alshabaab ay uga difaaci lahaayeen shacabka